How to configure TL-WA801ND - MYSTERY ZILLION
How to configure TL-WA801ND
September 2011 edited September 2011 in Networking
CONFIGURE လုပ်ခြင်လို့ browser မှာ 192.168.1.254 ကိုရိုက်ထဲ့လို့လဲမရ local area connection ထဲဝင်ပြင်လဲမရ web-base configuration page ထဲဘယ်လိုဝင်ရမလဲ ကူညီကြပါအုံး
မိတ်ဆွေရဲ့ Network Card Setting မှာ IP ကို 192.168.1.1 နဲ့ Subnet Mask ပြင်ရပါမယ်။
သူ့ Manual မှာ သေချာ​ကြည့်​လေ။ ip က 192.168.1.254 ဟုတ်​ရဲ့​လား သေချာ​စစ်​ပါ​အုံး။ မ​ရ​စရာ မ​ရှိ​ဘူးနော်​သူ့ အိုင်​ပီ မှန်​ရင်၊ လို​အပ်​ရင် သူ့ ဆိုက်​မှာ instruction manual ဒေါင်း​ပြီး ဖတ်​ကြည့် ပေါ့။
TP Link router default seting is 192.168.1.1
p/w - admin
ဟုတ်ကဲ့ manual မှာ 192.168.1.254 ပါ TL-WA801ND 300Mbps Wireless N Access Point အမျိုးအစါးပါ 192.168.1.1နှင့် လည်း မ ရပါဘူး အားကိုးပါတယ် ကူညီကြပါအုံး
Download the [email protected] software and install. And
Configure ur Laptop or PC as 192.168.1.74 (example) and run the [email protected] and find the IP address of ur Access Point....It is not successful.
Reset to ur AP to factory Default as the manual in TP Link website concern with ur model.
And try to log in again with default IP address.
ဒါဆို thanehtun ရေ 192.168.1.254 က Tp link ​accept point တွေမှာ သုံးပါတယ်။ Router က 192.168.1.1 ကို သုံးပါတယ် နောက် configure လုပ်တာကတော့ အတော်လေးကို လွယ်ကူရှင်းလင်းပါတယ်. တစ်ခုပဲ ရှုပ်အောင်လုပ်ထားတာက router ​တွေက subnet mask ကို ပြောင်းချင်လျင် အရင်ဆုံး default router setting တွင်အရင်ပြောင်းပေးပြီးမှ DHCP ကိုပြောင်းပေးပါ။ တခြား ပစည်းတွေမှာလို အလိုအလျှောက်မပြောင်းပေးသောကြောင့် ဖြစ်ပါတယ်။ မသိတာရှိသေးလျှင် ထပ်မေးနိုင်ပါတယ်။
ဟုတ်ကဲ့ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ စမ်းကြည့်လိုက်ပါအုံးမယ်
လက်ရှိသုံးနေတဲ့ ip ကဘာ class လဲ။ 192.168.0.xxx တို့ 10.20.xx.xx တို့ဆို configure လုပ်လို့ရမှာမဟုတ်ဘူး။ 192.168.1.xxx ဖြစ်နေမှ ဝင်လို့ရမှာ။ မသိရင် command မှာ ipconfig လို့ရိုက်ကြည့်လိုက် ။ ip ကို automatically ထားရင်တော့Manual ပြင်ပေးလိုက်ပါ။ 192.168.1.xxx
ip က 192.168.2.100 ပါ အဓိကပြသနာက web base management page ထဲဝင်မရတာပါ
I think you should change network class of your pc or laptop to the same with your AP.
I mean you should change your network class to 192.168.1.x.I can't enter to web base management page if your network ip class and AP ip class are not same.
You must change your ip to 192.168.1.xxx(something) manually
and sometimes default gate way will be need. If, you put the default gateway to 192.168.1.254
manually. Try again bro...If you can not open please reset your TL and try again the above instruction. Good Luck!!!
remove your current browser and reinstall again or install latest version(firefox).
tcp ip v4(192.168.1.xxx)
put in the address bar 192.168.1.254 or 192.168.1.1
hope will be ok...
hope you know already how to put the IP for your pc and TP link router.
That's why I did not explain too much.I think the only problem is your Browser is crash and reinstall the new version.